pe yakahwapura mukombe
You are at:Home»NHAU DZEMITAMBO»pe yakahwapura mukombe
By Abel Ndooka on	 May 11, 2018 · NHAU DZEMITAMBO
CHIKORO chePrince Edward ndicho chakahwapura mukombe wemakwikwi eDairyboard Rugby Schools Festival ayo akaitirwa muHarare svondo rapera.
Prince Edward yakakunda Churchill Boys 16-10 mufainari yainakidza kukunda ngoma kurira.
Tawanda Jimu – uyo anove Dairyboard Rugby Schools Festival Tournament director – anoti makwikwi aya akakosha sezvo vachiashandisa kutsvaga nyanzvi dzemangwana dzichazomirira nyika pamwe nezvikwata zvikuru zvemutambo uyu.
Anoti makwishu egore rino akarakidza kuti mutambo werugby wakura zvikuru uye uri kutambwa muzvikoro, vachitarisa zvikwata zvakawanda zvakauya kuzokwikwidza zvevakomana nevasikana.
“Tichiongorora zvikwata zvese zvakauya, takazviona kuti mutambo uyu uri kuramba uchikura uye uchisimudzira vatambi pamwe nezvikwata zvakawanda.
“Zvimwe zvikwata zvaizviona sezvikuru iye zvino zvave kuzviona zvega kuti hazvingohwine dambe nekuti zvimwe zvekumamisha chaizvo zvaitozvikunda zvichitamba rugby yepamusoro, inonwisa mvura,” anodaro Jimu.
Anoenderera mberi achiti mutambo uyu uripo pakupa mukana kuvatambi verugby kubva kuzvikoro zvakasiyana kuti vagosimukire kusvika padanho rave naTendai “The Beast” Mtawarira uyo anotambira maSpringboks eSouth Africa.
“Chishuvo chedu kuti titsvage mumwe Beast kuburikidza nemutambo uyu ndiko saka uchiitwa gore negore kuti vatambi ava vawane mukana wekusvika kure.
“Tinoziva kuti kuburikidza nemutambo uyu ndipo vamwe vatambi vanoonekwa nezvikwata zvakasiyana izvo zvinozovapa mukana wekuzvitambira,” anodaro.
‘Hatingopusha broom bedzi, kana varume . . .’